ပြည်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်မှု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပိုများခဲ့ - Yangon Media Group
ပြည်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်မှု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပိုများခဲ့
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုမှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သည့်နှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လူဦးရေတစ်သိန်းခြောက် သောင်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာမှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် လူဦးရေ နှစ်သိန်းအထက်ရှိခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနစာရင်းများအရ သိရသည်။
”၂ဝ၁၅ လောက်တုန်းက တစ်လကိုပျမ်းမျှ လူဦးရေကိုး ထောင်နဲ့ တစ်သောင်းလောက် ပုံမှန်ရှိတယ်။ ၂ဝ၁၇ လောက် ကျတော့ တစ်လကို တစ်သောင်းခွဲလောက်ဖြစ်လာတယ်။ ၂ဝ၁၈ မှာတော့ ပျမ်းမျှတစ်လကို နှစ်သောင်းလောက်ဖြစ် လာတယ်” ဟု အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်လုပ်သားစေ လွှတ်သည့် လိုင်စင်ရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ ၂၆ဝ ရှိပြီး မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ယူအေအီး၊ ကာတာ၊ ဂျပန်နှင့် ဂျော်ဒန်သို့ တရားဝင်လုပ်သား စေလွှတ် ခွင့်ပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ထိုင်း၊ ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သို့ လုပ် သားစေလွှတ်မှုကို MoU ၊ MoC များရေးထိုးစေလွှတ်လျက် ရှိသည်။ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်မှုသည်ထိုင်းသို့ အများဆုံးဖြစ်သည်။
လှိုင်သာယာတွင် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဌာနပိုင်အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရောင်းချရန် စီစဉ်နေမှုအပေါ် လ
ရွှေ့ပြောင်းသူ ဝင်ရောက်မှု ရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်က မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် မျက်ရည်ယို ဗုံးဖြင့် နှိ?
လာမည့်နှစ်တွင် ဆရာ၊ ဆရာမ နှစ်ထောင်ခန့်ကို ကန်ထရိုက် စာချုပ်ဖြင့် ခန့်မည်
နောင်ချိုတွင် သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေကိစ္စ သတင်းယူစဉ် လူအုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းဝန်းရိုက်သဖြင့် သတင?
”ကျွန်တော့်ဘဝက ဇာတ်နာတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အများကြီး ကြိုးစားနေရတာပါ” နေနော်
ဆော်ဒီအာရေဗီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ခါရှိုဂျီကို အိမ်ရှေ့မင်းသားက သတ်ဖြတ်ခိုင်းခြင်း??